Abavelisi beemveliso, abaxhasi - iFektri yeeMveliso zaseChina
200ml Amber Glass Pharmaceutical Bottle, Pill Jar kunye Black Aluminium isiciko
I-200ml yeglasi yeglasi yokuxuba ingqayi kunye nesiciko ziyinxalenye yothotho lwethu lwezisombululo zokupakisha. Iglasi egudileyo kulula ukuyihambisa nokuphatha, ngelixa iglasi yegolide esebenza njengesihluzi sendalo kwimitha ye-ultraviolet, ukuze ugcine ngokukhuselekileyo imichiza yokujonga iifoto kunye neepilisi njengevili. Okubandakanyiweyo i-45mm emnyama yokugubungela ulwelwesi kukhuseleko oluphezulu. Umbhobho ubunjwe entanyeni yebhotile ukuthintela ukuchitheka kunye nokuvuza.
Ibhotile yeglasi yeglasi yeglasi eyi-100ml kunye nesigqubuthelo sobungqina esinemilo yebhotile yesiko kwaye zilungele izisombululo ezininzi zamayeza kunye neekhemikhali kunye neesiraphu. Ukuba ufuna isigqubuthelo sobungqina bokuthintela ukuthintela ukungena kwabantwana, kuya kufuneka uyisebenzise.
Iibhotile zeglasi ze-1ml ze-Amber kunye neGlass eye Droppenser yeSampuli ye-Vial encinci yeBhotile yeoyile
Ubukhulu-ubude be-intshi ye-1.3, ubukhulu be-intshi ye-0.6 (kufakwe i-dropper).
Kulula ukubonisa iisampulu kubathengi, ziluncedo ekupakishweni kwakhona, ke kufuneka ufumane oko ukufunayo ekuhambeni.
Ibhotile ibandakanya idropha eyakhelwe kwibhotile yebhotile ukuze kube lula, ukuhambisa ngokuchanekileyo kunye nokuhambisa ngokuchanekileyo amayeza alulwelo, amayeza, imifuno kunye neeoyile ezifanelekileyo zearomatherapy.
200ml matte emnyama ibhotile yeglasi wawutyabeka ibhotile yotywala kunye nesiciko aluminiyam
Iibhotile zeglasi ezingama-200ml ziibhotile zesintu ezisetyenziselwa amayeza kunye nesiraphu yokukhohlela, kodwa ngoku zisetyenziselwa i-whisky nezinye iwayini notywala, iziqholo neeoyile. Ibhotile yebhotile yenziwe ngeglasi ekumgangatho ophezulu, kwaye ulwandlalo lwayo lubonelela ngendawo ethe tyaba engasetyenziselwa ukufakwa kwelebheli yebhotile elula. Sikwanikezela ngeziciko zealuminium kwiibhotile.
Iibhotile zewayini ezingama-750ml ze-Antique eziGreen Bordeaux
Ibhotile yeglasi eyi-750ml emnyama eluhlaza ibhotile ye-Fuchsia / Bordeaux yesitayile se-antique eluhlaza zezona zikhethwa kakhulu kwiindidi zeBordeaux ezinjengeBordeaux Cabernet Sauvignon kunye neCab Franc.
Indlela ekhawulezayo nefanelekileyo yokubhotela ibhiya. Ezi bhotile ziyi-16.9 oz flip-top yindlela ekhawulezayo nelula yokubhotela ibhiya ngaphandle kokufaka! Brewers njengokuthwala kunye nolawulo lwesahlulo esibonelelwe zezi bhotile. Kulula ukuzicoca kwaye zikhawuleze kwaye zisebenziseke lula. I-500 mL (i-16.9 fl oz) ibhotile ye-amber kunye neplastiki / iiceramics
Sinikeza ukupakishwa kwesiko!
330ml ubude entanyeni yeglasi ibhotile yeglasi utywala
Ibhotile yeglasi yeglasi eyi-330ml yenziwe ngeglasi yeglasi ephezulu. Banoyilo lweklasikhi kwaye banesibonelelo esongeziweyo sokusebenzisa iglasi yegolide evuthiweyo. Zilunge kakhulu kuwo onke amakhaya akho asekhaya, kwaye yenze ibhotile efanelekileyo ibe sisipho kuwe. Ukuba ujonga iibhotile zorhwebo kwindawo zentengiso, iibhotile zebhiya zeglasi ziya kukubonelela ngesisombululo esineendleko.
32oz 1000ml iglasi ingqayi yokugcina ingqayi kunye isilivere Screw isiciko intsimbi
Le ingqayi yeglasi eyi-1000ml 32oz yimbiza enkulu, efanelekileyo kakhulu ekusetyenzisweni kobungakanani bosapho. Ingqayi yeglasi nganye yenziwe ngeglasi ekumgangatho ophezulu ecacileyo kwaye ifikelele kwelona nqanaba liphezulu. Kwaye uyilo lwayo lujolise ekuphuculeni ukusebenziseka kwentamo ebanzi kunye nomzimba omde. Ikepusi engama-86mm iyahambelana nengqayi kwaye ikunika uthotho lwezibonelelo, kubandakanya iplastisol egalelwe i-liner ye-PE. Isivalo sikwahluka ngemibala, kubandakanya omnyama, igolide, isilivere njalo njalo. Nokuba zithini na iimfuno zakho, unokuqiniseka ukuba umxholo wakho ukhuselekile, ukhuselekile kwaye uboniswe ngendlela echanekileyo.
I-16oz 500ml ecacileyo yeJar yokutya yokutya kunye nesiciko seplastikhi yibhotile ebanzi, ekhuselekileyo ekutyeni efanelekileyo yokugcina uluhlu lweekhukhamba, iisosi kunye nokulondolozwa. Ubume obujikelezileyo bubonelela ngomphezulu omkhulu wokongeza iilebheli okanye olunye uphawu lwentengiso. Le ingqayi iza nesiciko sokusongela esingama-86mm- ilungele ukubonelela ngogcino olukhuselekileyo lwemixholo yakho.
4oz 120ml ezinamacala Clear Glass Jar nesiciko igolide metal
Ingqayi yeglasi ye-4oz yibhotile yejam ephakathi, efanelekileyo kakhulu ekuthengiseni kwimarike enkulu. Imilo eyahlukileyo kulula ukuyibamba ngesandla kwaye yenziwe ngeglasi ebonakalayo ekumgangatho ophezulu. Kukulungele ukubonisa kunye nokugcina ijeli yakho yasekhaya, ijem yeziqhamo, ichutney eshinyeneyo kunye nobusi obuswiti.
1.5oz 45ml Mini ezinamacala Clear Glass Jar for Honey, Jam, Decoration
Ingqayi yeglasi engamacala amathandathu enesiciko yinxalenye yoluhlu olunamacala amathandathu eengqayi, ukuba ufuna ukubonelela ngeemveliso ngobukhulu obahlukeneyo, kuya kufuneka uthathele ingqalelo oku. Ibhotile engu-45 ml ebanzi-ngomlomo yenziwe ngeglasi ekumgangatho ophezulu esekuhleni, efanelekileyo ukubonakalisa kakuhle kunye nokugcina ijeli yakho yasekhaya, ijem yeziqhamo, i-chunky chutney kunye nobusi obuswiti.
Ukuhluma kweJar Kit Imbewu yokuhluma imbewu ibandakanya uMlomo oManzi uMason Jar, i-304 yeLinless Stainless Mesh Lid, i-Neoprene Sleeve kunye nePlastiki yeTrip Dray yokwenza iMbewu ihlume
Le khithi iqulethe yonke into oyifunayo ukuze uqalise. Inengqayi yeglasi ehlumayo enokukunceda utyale iintlobo ezahlukeneyo zembewu ngaphandle kwengxaki. Itreyi yetriphu. Ngoku awusayibeki ingqayi kwindawo emnyama. Sibonelela ngomkhono wokukhusela ukukhanya onokulinganisa ubumnyama, ukuze ukwazi Ukulawula imeko-bume apho ingqayi inokubekwa khona ngokubeka umkhono engqayini. Oku kunceda kuhluma, kunciphisa ixesha lokuhluma, kuvelisa amagqabi amade, kwaye kunokwenza ii-pigment zezityalo, oko kunceda imbewu ethile ihlume.
Sula iibhotile Pump Pump, Iglasi Ibhotile yokuthambisa ngePomp, Iglasi Bottle Nge Pump wekhadi, Iglasi Bottle Nge Spray Pump, Iibhotile zeglasi zeempompo zeeoyile ezifanelekileyo, Iibhotile zePompo yeGlasi yeShampoo,